ဒေတာအတွေ့အကြုံ FE အင်ဂျင်နီယာ Intern | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ဒေတာကိုအတွေ့အကြုံ FE အင်ဂျင်နီယာချုပ် International
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: ဒေတာများကိုအတွေ့အကြုံ FE အင်ဂျင်နီယာချုပ် International
ရာထူး: ဒေတာကိုအတွေ့အကြုံ FE အင်ဂျင်နီယာချုပ် International
ကုမ္ပဏီ: ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြု Inc မှ
ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြု, Verizon က၏လက်အောက်ခံ, အဆောက်အဦမှကျူးလွန်နေတဲ့တန်ဖိုးများကိုဦးဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီလူမျိုးကိုချစ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ 50 + မီဒီယာနှင့်နည်းပညာအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပြောင်းလဲနေသောအိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့ကမ္ဘာတဝှမ်းဘီလီယံကိုတချက်ကလူရောက်ရှိဖို့။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်မိုဘိုင်းကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မီဒီယာများ၏အနာဂတ်ပုံဖော်နေပါတယ်။
ကြှနျုပျတို့အကွောငျးတစ်ဦးက Little က
ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုနှင့်ပူးပေါင်းဖို့များနှင့်အံ့သြဖွယ်အမှုအရာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်း 1 ဘီလီယံကိုလူတို့အဘို့ဖွစျပကျြစေ။ ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးက start-up, ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အစာရှောင်ရွှေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြခြင်းနှင့်မဆုတ်မနစ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများသည်ဖှယျနှင့်မှေ့လျြောအာရုံစိုက်နေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်အများဆုံးအရေးနှင့်လူရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍအစေခံသောသူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်မှုကို enable, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသော့ဖွင့်သောမရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို (မေးလ်, Messenger ကို, အုပ်စုများ, ဆက်သွယ်ရန်နှင့် Flickr ကို / ဓာတ်ပုံများ) reimagine နှင့်ဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။
စားသုံးသူထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်ယူဆချက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲထံက၎င်း, ထုတ်ကုန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလမ်းပြခြင်းငှါ၎င်း, သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဖြတ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် - လူတိုင်းအတွက်နေ့စဉ်နှင့်နေရာတိုင်းအသုံးပြုအရှိဆုံး, ကိုယ်ပိုင်ဖှယျနှင့်ဖျော်ဖြေမှုအတွေ့အကြုံများကိုသို့ Yahoo ရဲ့ဆက်သွယ်ရေး + ထုတ်ကုန်ကိုတည်ဆောက်ကိုကူညီပေးပါတယ်။
သငျသညျဒေတာရ။ သငျသညျအသိပညာနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်များအတွက်ရေငတ်ရှိသည်။ သငျသညျရှင်သန်နှင့်ထုတ်ကုန်, ဒီဇိုင်း, အင်ဂျင်နီယာ, စျေးကွက်နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်အသင်းများကိုနားလညျပွီးပျေါ၌ပြုမူဆောင်ရွက်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာ data တွေကိုတင်ဆက်ဖို့ကြိုးစားကြသည်။
သငျသညျတိုးတကျမှုမရ။ သင်တစ်ဦးစားသုံးသူ-အာရုံစူးစိုက်, ဒေတာ-မောင်းနှင်နှင့်ကြီးထွားမှုနည်းဗျူဟာများ, လမ်းပြမြေပုံ, scrums နှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်း, အ analytics / အသိအမြင်ကိုဖြတ်ပြီး, ဝယ်ယူ / ရည်ညွှန်း, activation / onboard နှင့်ကလေးမွေးစားခြင်း / retention ကိုကွင်းဆက်ထောက်ခံခဲ့သူတိုးတက်မှုနှုန်း-enable အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ ။
သငျသညျဒစ်ဂျစ်တယ် / မိုဘိုင်းရ။ နှင့်မိုဘိုင်း / ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂေဟစနစ်၏အားကြီးသောနားလည်မှု - - သင်သိသာထင်ရှားသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသည်အက်ပ်များမှကြော်ငြာနှင့် analytics ရန်။ သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာကဤ clients များပေါ်တွင်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုတည်ဆောက်လေပြီ။
သငျသညျပွုရ။ သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာလိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်ထုတ်ကုန်, ဒီဇိုင်း, အင်ဂျင်နီယာ, စျေးကွက်နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်အသင်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့, စီးပွားရေး drive ကိုဆုံးဖြတ်ချက်များကူညီ tools များသို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာသာပြန်ဆိုပါပြီ။
ဒီဇိုင်း, software ကိုတိုးမြှင့်မှုများနှင့်အသစ်သောထုတ်ကုန်များအတွက်ကုဒ်နှင့်စမ်းသပ်ဆော့ဖျဝဲစနစ်များကိုသို့မဟုတ် applications များဖွံ့ဖြိုး; လိုအပ်သောအဖြစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်မွမ်းမံ
စီမံကိန်းကိုဘာလဲဆိုတော့အချိန်များ၏ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်, အကောင်အထည်ဖော်မှုဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များစနစ်စီးဆင်းမှုကားချပ်, စာရွက်စာတမ်းများ, စမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်စနစ်များဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောထောက်ခံမှု
လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှပြုပြင်မွမ်းမံအကြံပြုနှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်, ဗိသုကာ, နှင့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အထောက်အကူပြု
တက်ကြွစွာတစ် BS, MS, ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံသို့မဟုတ်ဆက်စပ်အဓိကပါရဂူဘွဲ့နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု၏အားကြီးသောစံချိန်လိုက်စား
ဆော့ဖျဝဲအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်များ, tools တွေ (ဘာသာစကားတစ်ခုကိုအတွက် programming စာကျွမ်းကျင်မှု, ဖြစ်နိုင်ရင်ဂျာဗား, C / C ++, နည်းလမ်းများ, စမ်းသပ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး, ထောက်ခံမှု, algorithms များနှင့်အချက်အလက်ဖွဲ့စည်းပုံဥပမာ) ၏အသိပညာ
object-oriented programming သဘောတရားများ, အကြီးစား software ကိုဗိသုကာ, ကွန်ယက်များနှင့်ဖြန့်ဝေမှုစနစ်များနှင့် UNIX / Linux ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအကျွမ်းတဝင်
back-အဆုံးအတွေ့အကြုံက (စသည်တို့ကို Grid, Hadoop,)
Perl, PHP, Python ကို, ပတ္တမြား, LAMP နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်
အတှေ့အကွုံ databases ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း (Oracle ကစသည်တို့ကို, MySQL, အုံ,)
cross-browser ကို Cross-Platform ကို coding
အကြီးစားကြီးများ-user base ဟာ website ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတအတွေ့အကြုံကို
ဒေတာကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း, စက်သင်ယူမှု, AI အ, စာရင်းဇယား, information retrieval, ဘာသာစကားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းအဘို့စိတ်အားထက်သန်မှု, ဒေတာ visualization နှင့်သိကောင်းစရာများပုံရိပ်ယောင်နဲ့ Actions ထိုးထွင်းသိမြင်ဖို့ဒေတာကိုဘာသာပြန်ဆို
Photoshop ကို, Illustrator, Sketch, သို့မဟုတ်အခြားအမြင်ဒီဇိုင်းရေးကိရိယာများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှု
ထိုကဲ့သို့သော D3.js, Chart.js နှင့် plot.ly အဖြစ်ဒေတာ visualization စာကြည့်တိုက်များနှင့်အတူ front-အဆုံးဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံက
Excellent ကလူ့, အဖွဲ့အစည်း, ဖန်တီးမှုများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုနှင့်တစ်ခုညီမျှအခွင့်အလမ်းအလုပ်ခွင်ဖြစ်ဖို့ဂုဏ်ယူသည်။ အားလုံးအရည်အချင်းပြည့်မီလျှောက်ထားရန်နှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲအလုပ်အကိုင်အများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလက်ခံရရှိမည်အကြောင်း, အပေါ်အခြေခံပြီး, လူမျိုး, လိင်, အသားအရောင်, ဘာသာရေး, အမျိုးသားရေးဇာစ်မြစ်, လိင်, ကျား, မဝိသေသလက္ခဏာ, ဝါရင့်အခြေအနေ, မသန်စွမ်းသို့မဟုတ်အခြား protected အမျိုးအစားခွဲခြားဆက်ဆံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုနှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်အနေစဉ်အတွင်းလျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအားလုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့လက်လှမ်းပတ်ဝန်းကျင်ပေးဖို့နဲ့အားလုံးန်ထမ်းများအတွက်အပျနှံခဲ့သည်။ သင်တစ်ဦးအလုပ်လျှောက်ထားရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နေရာထိုင်ခင်းလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးသို့မဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်လျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက် ကျေးဇူးပြု. [အီးမေးလျ protected], ဒါမှမဟုတ် 1-866-772-3182 မှာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ။
လောလောဆယ်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုနှင့်အလုပ်လုပ်? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း site ပေါ်တွင်လျှောက်ထားပေးပါ။
SoftAtHome, MStar, CES2017 ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2018-05-30
ယခင်: TVU ကွန်ယက်ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားတော်ဝင်မင်္ဂလာဆောင်၏နှလုံးရယူပါကူညီပေး
နောက်တစ်ခု: အဝတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း | ဂရပ်ဖစ် | ဒီဇိုင်း Internship